Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Joel Matip Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha na aha njirimara; “Jimmy". Ọmụmụ ihe anyị dị na nwata bụ Joel na akụkọ ndị na-adịghị mma. Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere nnukwu 6 ′ 5 'dị elu. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Joel Matip's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mbido na nzụlite ezinụlọ
Malite ya, ezigbo aha ya bụ Job Joël André Matip. Joel Matip dị ka a na-akpọkarị ya na Thbọchị 8 nke August 1991 na nne ya, Eva-Maria Matip na nna, Jean Matip na Bochum, Germany. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna Joel Matip mara mma dịka oge ha kwadoro nwa ha n'oge 2014 FIFA WorldCup.
Joel Matip Ndị nne na nna - Mama, Eva-Maria na Nna, Jean Matip. Ebe E Si Nweta Egwuregwu.
Ikpe ikpe site na ọdịdị ha, ị ga-ekwenye na a mụrụ Joel na ọkara ọkara. Ị maara?… A mụrụ ya na nna Cameroon na onye German nke nwere ike inwe anya Asia.
Joel Matip sitere na nzụlite ezinụlọ dị umeala n'obi. Mama ya, Eva-Maria, bụ ọkachamara ọkachamara na nlekọta mgbaka. Ọ raara ndụ ya nye na-arụ ọrụ na ndị nwere ncheta ncheta. Mama Joel Matip na-arụ ọrụ maka German Red Cross.
Ị maara?… Nna Joel Matip, Jean bụ onye nkụzi kemịkalụ tupu ọ banye bọọlụ na obodo ya bụ Cameroon. Ọ bụ Cameroon si kemịkalụ kemịkal wee bịa Germany. Ndị nne Joel Matip Jean na Eva-Maria zutere mgbe nna ya Jean nọ na-aga akwụkwọ na mahadum dị na Bochum. Ha hụrụ n'anya, kwado mmekọrịta ha, lụọ ma mụọ Joel.
Joel Matip tolitere na nwanne ya nwanyị, Rebecca onye mesịrị ghọọ onye ọkà mmụta mmeri nke ọma na Gelsenkirchen. O nwekwara nwanna nwoke okenye nke aha ya bụ Marvin Matip bụ onye na-abụkwa ndị ịgba egwu.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
O siiri nna Joel Matip ike Jean ịnagide ezumike nká ya site na bọl. Onye mbu ndi Cameroon gbara boolu nwere echiche iji gaa n'ihu ibi ndu ha site n'aka umu ya nwoke bu Mavin na Joel.
N'ịbụ onye nwere ndị na-enyocha ụkwụ dịka nna, ọ bụ ihe dị mma maka ịkụnye egwuregwu ahụ na Joel ọbụna mgbe ọ gara ụlọ akwụkwọ Gesamtschule Berger Feld. Mmasị ya maka egwuregwu ahụ hụrụ ya na-edebanye oge na SC Weitmar 45 n'afọ 1995.
N'oge na-adịghị anya, obere Joel malitere ịmalite inwe mmetụta na ụlọ ọrụ ahụ. Smiley Joel nke dị n'okpuru ebe a kwaliri ọwụwa ngwa ngwa ka ọ na-eto eto megide ndị egwuregwu tọrọ ya.
Joel Matip Childhood Photo. Ebe E Si Nweta IFC Globe
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Omume Joel mere ka ọ nwee ohere na klọb nke obodo ya, VfL Bochum. Ọ bụ ihe dị mma maka onye ọ bụla na-eto eto German na-arọ nrọ na Joel Matip abụghị onye ọzọ. Mkpebi o kpebisiri ike igwu egwu na klọb ndị ntorobịa nke German abụghị nke na-agafe n'echiche efu.
Mgbe 9 dị afọ 2000, Matip nwetara Schalke mgbe o nwesịrị ikpe ikpe. Ka Matip nọgidere na-etolite, ọ hụrụ na ọ na-edozi ndụ ya na Academy, na-eme ọganihu dị nwayọ site na ọgbọ dị iche iche ma banye n'ozuzu football.
Mbido mbụ nke Matip na German elu ụgbọ elu hụrụ ya ka ọ na-anapụta Nwoke nke Egwuregwu arụmọrụ megide Bayern Munich na November 7, 2009. Tohapụ ihe ngosi ahụ dị egwu na ihe mgbaru ọsọ hụrụ ya ka ọ bụrụ onye na-enwe obi ụtọ na ụlọ ọrụ ahụ.
Matip gara na-emefu oge asaa na ụlọ ọrụ na-eme 194 ihu. Oge na-akọwapụta nke mere ka Liverpool nweta ọbịbịa bịara mgbe Matip tiri ọkpọka onye nduzi Dortmund mbụ Jurgen Klopp na 2011 / 2012 DFL Supercup ikpeazụ.
Joel Matip na-eme DFL Supercup na ndị otu ya. Ebe E Si Nweta Faz.
Mgbe nkwekọrịta ya na Schalke nwụrụ na oge okpomọkụ nke 2016, Jurgen Klopp bụ n'etiti ndị isi na-alụ ọgụ maka mbinye aka ya. N'ihi oge ochie, German Cameroonian kpebiri iso onye njikwa ya na Liverpool.
Dị ka n'oge ederede, ụlọ ọrụ Liverpool dị elu dị elu ma dị ike n'iso mmekọrịta ya dị egwu van Dijk na Dejan Lovern. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'azụ nwoke ukwu ọ bụla, enwere nwanyị mgbe niile, yabụ okwu a na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-agba ọsọ ọ bụla sitere na mgbọrọgwụ Africa, e nwere WAG mara mma na Larissa.
Joel Matip na enyi ya nwanyị, Larissa. Ebe E Si Nweta Foto: Imgur na WTFoot.
Larissa bụ WAG kachasị dị omimi n'ihi na ọ dịghị onye maara ihe ọ bụla banyere ya ma e wezụga n'ihi na ọ na-akpakọrịta Matip ma nwee mmasị ile ya anya.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Mata ụdị ndụ Joel Matip ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Joel bu ihe di egwu, okike, inwe obi ike onwe ya, nke kachasi na nke a na-achoghi. O nwere ike iru ihe ọ bụla ọ chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ọ na-etinye onwe ya.
Joel Matip nwere ọtụtụ ndị enyi n'ihi na ha na-emesapụ aka ma na-eguzosi ike n'ihe dika onwe ya. Omume ọchị ya na-eme ka mmekọrịta ya na ndị ọzọ dị mfe karị. A na-ekpughe ihe atụ na vidiyo ya Daniel Sturridge.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Ị maara?… E nwere ụbụrụ cerebral, ọbụna nke ahụike, gbasara Joel Matip na-agbachitere. Ikekwe ọ bụghị ihe ijuanya na ọgwụ na bọọlụ bụ ọrụ ezinụlọ ya.
Ezinụlọ ezinụlọ Joel Matip bụ otu n'ime ezinụlọ Germany kachasị nwee ọganihu sitere na mgbọrọgwụ Cameroon. N'ihi onyeisi ezinụlọ bụ Jean Matip, ezinụlọ Matip emeela akụkọ ihe mere eme na ịkụzi onye nchịkwa ojii nke mbụ na obodo ha, Bochum. Jean Matip, bụ onye nkụzi nke mbụ (ya na ndi ya na foto ya) ghọrọ onye ọkpụkpọ ma mesịa bụrụ onye nchịkwa nke FC Italia na B.
Joel Matip Family Photo, nna ya (n'aka ekpe), nwanne ya nwoke bụ okenye Marvin (n'akụkụ aka ekpe). Ebe E Si Nweta WTFoot.
Nwa nwanne Joel Matip, Marvin Matip bụ afọ 6 karịa ya. Dị nnọọ ka Joel, Marvin nọchitere anya Indomitable Lions nke Cameroon. Site na klọb klọb, o mere ya onyeisi ndị isi nke FC Ingolstadt, ụlọ ọgbakọ German na Bundesliga 2.
Dabere na asịrị, akụkụ nne Matip nwere ọtụtụ ndị ezinaụlọ mụọla ọgwụ. Dịka ọmụmaatụ, nna nna Joel Matip na nwanne nwanne Martin bụkwa ndị dọkịta.
N'adịghị ka ahịa ahụike, ezinụlọ Joel Matip si n'akụkụ nna ya nwere mgbọrọgwụ bọọlụ miri emi. Ọ bụ nwa nwanne nna aha ya bụ Joseph-Desire Job nke nwere okpu 52 Cameroon dị n'etiti 1998 na 2011.
Joel Matip Ndụ Ezinụlọ- Banyere Nwa nwanne ya.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- LifeStyle
N'adịghị ka ụfọdụ n'ime ụmụnne ya ndị sitere na mgbọrọgwụ Africa, ndị na-amasị Obafemi Matins, Mario Balotelli, Adebayor, wdg. swagger, ụmụ agbọghọ wdg. Ọ dị nnọọ nro na ụgbọ ala Mercedes ya.
Joel Matip Childhood Akụkọ Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Eziokwu efu
Mmekọrịta na Rigobert Song:
Mgbe ọ bịanyere aka na Liverpool, Joel Matip ghọrọ onye nke abụọ Cameroon na-egwu maka Reds mgbe akara ngosi obodo ya, Rigobert Song.
Ịtụnanya Ịgbahapụ Ụgwọ Ọrụ Ya:
Na July 2016, Joel Matip bịanyere aka na Liverpool na mgbe ọ gbaruru, na-akpata s 10,383 (£ 9,347) kwa ụbọchị, 433 389 (£ 0.11) kwa awa na 5 XNUMX kwa nke abụọ. Okwesiri ka aru ihe dika XNUMX aro. Cheedị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-enweta ụdị ego a na ihe ị ga-eji ụdị ego ahụ mee!?…
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ anyị bụ Joel Matip Childhood akụkọ nke a na-agbakwụnyeghị akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.